စုံတွဲတွေတိုင်း ကြုံတွေ့တတ်တဲ့ ပြဿနာအသေးအဖွဲလေးများ…. - MyanmarFamilyLife
စုံတွဲတွေတိုင်း ကြုံတွေ့တတ်တဲ့ ပြဿနာအသေးအဖွဲလေးများ….
စုံတွဲတော်တော်များများဟာ ရန်ဖြစ်တတ်ကြတာမို့ တစ်ခါမှ ပြဿနာမှမဖြစ်ဖူးဘူးလို့ ပြောတဲ့သူကတော့ လိမ်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ ရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် နှစ်ဦးသားပြန်လည် အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေတော့ရှိပါတယ်။
၁။ “နင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းရဲ့ဖေ့ဘုတ်က ပုံတွေကို ဘာလို့ Like ပေးနေသေးတာလဲ” လို့ စုံတွဲတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေးဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာ Social Mediaကို အသုံးများလာကြတာမို့
ချစ်သူတွေဟာလည်း အချင်းချင်း အမြဲတမ်း ထောက်လှမ်းနေလို့ရတာကြောင့် ဒီလိုပြဿနာတွေကို ရှောင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အပေးအယူမျှနေဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ ကိုယ်ကဖုန်းကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူဆီက “နင်ကငါ့ထက်ဖုန်းကိုပိုချစ်တယ်နော်” ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းကိုတက်နိုင်သလောက်မကြည့်ပဲ နှစ်ယောက်သား ကြည်ကြည်နူးနူး အချိန်ကုန်ဆုံးသင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာရှိလာရင်လည်း ချစ်သူကိုနားလည်အောင် ရှင်းပြလိုက်တာဟာ နှစ်ဦးသားစိတ်ဆိုးစကားများပြီး အဆင်မပြေဖြစ်တာကို တက်နိုင်သလောက် လျှော့ချလိုက်နိုင်မှာပါ။
၃။ “မင်းအဲ့လိုပွစိပွစိပြောနေလို့ ငါ့နားကိုတောင် လှီးဖြတ်ပစ်ချင်စိတ်တွေပေါက်လာပြီ” လို့လည်း ပြောဖူးကြမှာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အတူတူနေတာကြာလာရင် အဲ့လူရဲ့ အကြောင်းတွေပိုသိလာရပြီး စိတ်ရှုပ်လာရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတွေးပြီး စိတ်ပျက်နေမယ့်အစား ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းဖူးတာလေးတွေကို ဖြည့်တွေးပေးကြည့်ပါ။
၄။ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူက နှစ်ပတ်လည်နေ့လိုမျိုး အမှတ်ရနေရမယ့် နေ့ရက်တွေကို မေ့နေရင် စိတ်ဆိုးပြီး ပေါက်ကွဲလိုက်တာဟာ အခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တာမို့ နားလည်ပေးပြီး နောက်မမေ့ဖို့အတွက် သတိပေးသင့်ပါတယ်။
၅။ ရန်ဖြစ်စကားများတိုင်း လမ်းခွဲဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကွာရှင်းဖို့ ပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ စိတ်သဘောထားကွဲလွဲပြီး ရန်ဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲစကားမဆိုဘဲ နှစ်ယောက်သားအတူတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး ပြေလည်အောင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။
၆။ ချစ်သူတွေဟာ တွဲတာအချိန်ကြာလာပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ကောင်းကောင်းသိနေပြီလို့ ယူဆလာကြတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ လူ့စိတ်သဘောထားတွေ အကြိုက်တွေဟာ ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး သူဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်းလေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။
၇။ ကိုယ့်ကို အဆင်ပြေအောင် အသေးအဖွဲလေးကအစ ဂရုစိုက်ပေးတတ်တာမျိုး၊ ကိုယ်စိတ်အားငယ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုအားပေးတတ်တာမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် အမြဲတမ်းကူညီပေးတတ်တာမျိုး စတဲ့ ချစ်သူရဲ့လုပ်ရပ်လေးတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့
“ကျေးဇူတင်ပါတယ်” လို့ပြောခြင်းဟာ သူတို့ကို အလေးထားရာရောက်တဲ့အတွက် “နင်က ငါ့ကိုဆို အလေးမထားဘူးနော်” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ချစ်သူဆီက ထပ်ကြားရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၈။ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ အတိတ်မှာ ဘာတွေပဲ လုပ်ခဲ့ပါစေ။ ဘယ်လိုလူနဲ့ပဲ အတူတူရှိခဲ့ပါစေ။ ယခုလက်ရှိမှာ ကိုယ့်အနားမှာရှိနေတာမို့ အတိတ်ကို ပြန်တူးဆွပြီး ပြသနာမရှာပါနဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကို သိပြီးတာတောင်မှ ကိုယ့်အပေါ်သည်းခံပြီး ကိုယ့်အနားမှာရှိနေသေးတဲ့ ချစ်သူကို အမြဲအသိမှတ်ပြုလေးစားသင့်ပါတယ်။
သမီးလေး ဗစ်​တိုးရီးယား​ ကိစ္စအတွက် လာရောက်စုံစမ်းသူများ နေစရာအခက်ခဲရှိပါက ​နေပြည်​​တော်​ ရှိ ​ကျောက်​စိမ်းတည်းခိုခန်း မှ တစ်​ဦးလျှင်​ ၂ ရက်​အခမဲ့တည်းခိုခွင့်​ပြု